Pọtụfoliyo Adobe: Wulite ma kwado Pọtụfoliyo Onlinentanetị Gị | Martech Zone
Sunday, Eprel 24, 2016 Sunday, Eprel 24, 2016 Douglas Karr
Adobe na-egwu egwuregwu egwuregwu ha n'ịntanetị. Anyị ejirila Creative Cloud mee ihe ruo afọ ole na ole ugbu a wee hụ onwe anyị na-anabata teknụzụ Adobe karia. Ugbu a Adobe amalitela nke ya Pọtụfoliyo saịtị, ihe ngwọta zuru oke maka ndị na-ege ya ntị na ụlọ ọrụ. Na mgbakwunye na iji aha ngalaba nke gị, ihe editọ Pọtụfoliyo Adobe na-enye atụmatụ ndị a:
Na mgbakwunye na iji aha ngalaba nke gị, Pọtụfoliyo awade ihe ndi a:
Access Kdị Typekit ọba akwụkwọ ozi.
Idezi ndụ na-ahapụ gị ịhụ mgbanwe gị ka ị na-eme ha.
Direct Direct: Ihe ọ bụla ị pụrụ ịhụ, ị ​​nwere ike idezi.
Hụchalụ weebụsaịtị gị nke ọma na desktọọpụ, mbadamba na mobile.
Mepụta oru na Pọtụfoliyo ma ọ bụ Behance ma mekọrịta n'etiti ha abụọ.
Nhọrọ iji gbanyụọ nri iji chebe ihe oyiyi gị.
Nhọrọ iji mee ka ngosi ọkụ nke ihe oyiyi gị.
Uzo a nwere ihe mara mma, nke ejikere ejikere, nke na-anabata:
Tags: adobePọtụfoliyommmmmmmmmmmmPọtụfoliyo n'ịntanetịPọtụfoliyoPọtụfoliyo saịtịụdị